You searched for Emmerson Mnangagwa - Page 3 of 588 - SABC News - Breaking news, special reports, world, business, sport coverage of all South African current events. Africa's news leader.
Home » Search Results for "Emmerson Mnangagwa " Query (Page 3)
Mnangagwa reassigns military officers to Foreign Affairs
18 February 2019, 8:01 PM
Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa has reassigned four military officers to join the Foreign Affairs Ministry.
Mnangagwa holds talks with diplomats
14 February 2019, 8:50 PM
Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa has held talks with diplomats accredited to his country. Mnangagwa has come under pressure for failing to address the challenges facing Zimbabwe.
Zimbabwe churches intervene as opposition snub Mnangagwa talks
8 February 2019, 6:27 AM
Zimbabwe’s churches on Thursday sought to broker talks between the government and its opponents over a political and economic crisis they said had left the country “angry and traumatised”, after the main opposition snubbed a meeting with the president.
Zimbabwe’s opposition MDC snubs Mnangagwa talks, wants outside mediator
7 February 2019, 6:12 AM
Zimbabwe’s main opposition on Wednesday snubbed talks with President Emmerson Mnangagwa meant to try resolve a political and economic crisis, saying any dialogue with the president must be brokered by an independent outside mediator.
Zimbabwe opposition leader snubs Mnangagwa dialogue call
6 February 2019, 4:11 PM
Zimbabwean opposition leader Nelson Chamisa snubbed an invitation by President Emmerson Mnangagwa to join a national summit on Wednesday, just weeks after security forces crushed protests over the worsening economy.
Mnangagwa denies rift with deputy
2 February 2019, 6:45 AM
Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa dismissed rumours of a rift with his deputy, which have gathered momentum since he promised action in response to a brutal security crackdown that began last month while he was abroad.
Mnangagwa accuses West of ‘backing violence’ in Zimbabwe
1 February 2019, 2:22 PM
Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa on Friday accused western countries of supporting violent countrywide protests last month that were sparked by a huge rise in fuel prices.
Mnangagwa declares musician Mtukudzi a national hero
24 January 2019, 7:36 PM
Zimbabwean President Emmerson Mnagagwa has declared legendary jazz musician, Oliver Mtukudzi a national hero.
‘Mnangagwa is failing to live up to pre-election promises’
15 January 2019, 2:42 PM
Zimbabweans are accusing President Emmerson Mnangagwa, of failing to live up to pre-election promises to kick-start growth in the country as fuel price protests continue.
Mnangagwa begins five-nation tour amid fuel protests
14 January 2019, 6:27 PM
Amidst violent protests in his country over hiked fuel prices, Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa has arrived in Russia to begin a five-nation tour which will end next week at the World Economic Forum on Davos, Switzerland.